အီဟွာသူရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: 2012
အမေစု ၏ စာကဗျာ
ကန်ရေပြင်၌ တက်သောေ
မတည်သော အသက် ခန္ဓာ ဟူသည်
ကျွန်မ ကိုယ် ကျွန်မ
ကျွန်မကို ချစ်သူ မချစ်သူ
မျက်မြင် မုချ အသုဘ ကမ္မဋ္ဌန်း
ကျွန်မ၏ အထွဋ်မြတ်သော ဆံပင်
ရွှေတိဂုံ ဆံတော်ရှင်သို့ လှူဒါန်းပါ။
နာရေး ကူညီသော စေတနာရှင်
ကျွန်မ အသက်မဲ့ ခန္ဓာကို
ရလာသော ခန္ဓာ၏ ပြာမြေဇာ
ကျွန်မ၏ နေအိမ် (သို့)
ကျွန်မ၏ အသုံးအဆောင် ...စာအုပ်
ကျွန်မရဲ့ မြန်မာ အ၀တ်အစား
ဆင်းရဲသော သံဃာအိုများ အတွက်
ကွယ်လွန်သူ မိဘများ အမှူးထား၍
ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ရန်ပုံငွေ
ကြား...ကြားသမျှ အမျှ အမျှ အမျှ
နားလည် ပါရမီ ဖြည့်ပေးသူ သားများ
အဖေပေးခဲ့သော ပညာမှ တပါး
စိတ်ဓါတ်နှင့် ကြံ့ခိုငသော မျိုးရိုးအမွေ
ကျွန်မ ပြုသော ကုသိုလ် အဖို့ဘာဂ
ကျွန်မ အဖေ၏ ပန်းချီကားတချပ်....
ကျွန်မရဲ့ အနှစ် (၂၀)
ကျွန်မ ရတဲ့ ဆုတွေ လက်ခံတဲ့အခါ
မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ မေတ္တာ စေတနာ
ကျွန်မ အသက်ဘေးအတွက် သူစိုးရိမ်တယ်။
ပုထုဇ္ဇနော ဥမ္မာတကော အဆိုရှိ
ကျရာ နေရာ ကူညီပါဝင်
ကျွန်မအတွက် ထားတဲ့ ချစ်မေတ္တာ
ကျွန်မ လက်ထက်မှ မရသေးခင်
ဒို့ မြန်မာအမျိုး...သိက္ခာ မျိုးနွယ်ဆွေ။
အာဏာရှင် စနစ် ပြုတ်ကျပါစေ။
(အမေစု ကိုယ်တိုင်ရေး ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပေမယ့် အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေးပို့တာလေး လက်ခံရမိတော့ ဖတ်လိုက်တာ ရင်ကို တဲ့တဲ့ထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်
အမေစု သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ...)
မတ်လ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၂
ဒီအမေစု စာကဗျာဆိုတာလေးက ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက အိုးဝေသတင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ မသဒ္ဒါဆိုတဲ့ ကလောင်ရှင်ကရေးတာတဲ့။ အခုမှ လူအများကြားပြန့်ခွင့်ရတာကိုး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးတဲ့သူ တော်ပါတယ်နော် စာဖတ်သူ နှလုံးကို သိမ်းကျုံးယူသွားတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါ့
မတ်လ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၂
အာဏာ ပါဝါနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမွှန်းတင်
ကျော ကော့ အောင်သာခံဘို့ရာ
မတော်မတရား ဝါး ထားတဲ့သူတွေလည်း
ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ လေစားလောက်တဲ့ အားကိုးလောက်တဲ့ တိုင်းပြည်အနာဂတ်သားကောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် ကဗျာဆရာ အနုပညာသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကြားဘူးပေမယ့် သူ့ ကဗျာလေးတွေ ဒီနေ့မှ အီးမေးလ် ထဲရောက်လာလို့ ဖတ်ဖူးခဲ့တာပါ။ Internet မှာ သိမ်းထားချင်လို့ ခွင့်ပြုပါ ...
သင်တို့ ရှိရာ ကျွန်ုပ်လာမည်
ဒဏ်ချိုချို ဘဝတိုတို သွားရည်ယို ငေးကောင်းတုန်း
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ကိုယ်စား မင်းကိုနိုင် ရေးဖွဲ့ ရွတ်ဆိုတဲ့ကဗျာ)
အံ မ ကျ ဘူး ...
လူမိုက်ဟာ ကံကောင်းနေမှန်း မသိလို့ မခံစားပေမဲ့
တစ်ယောက်ဒဏ်ရာတစ်ယောက် လျှာနဲ့ လျှက်ပေးကြ
တစ်ယောက်ကွေးရင် တစ်ယောက် ထုရိုက်ဖြောင့်ပေးကြ
ငါတို့ လျော်နိုင်လို့ အထိုးခံဝံ့တဲ့
"ရွှေခွက်" လို့ လာရေးတဲ့ အက္ခရာတွေပါ။
မှန်ထဲမှာငါ့ကိုယ်နဲ့ ဘယ်သူ့ မျက်နှာလဲ...
မျောက်ကလေးတွေ သန်းရှာနေတဲ့ အရုပ်လဲပါ။
by Nay Phone Latt on Tuesday, October 18, 2011 at 9:08pm
ကျွန်တော် မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ခံစားနာကျင်ခဲ့ရ
အဆုံးစွန်ဆုံးအထိ ရဲရင့်ရမယ် ဆိုတဲ့
18.10.2011 (Tuesday) မှာ ကျရောက်သော ကိုပေါ့်ရဲ့ (၄၉) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အမှတ်တရ...
Nay Phone Latt FB မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Love is real, real is love ...
Love is feeling, feeling is love ...
Love is touch, touch is love ...
Love is reaching, reaching is love ...
Love is asking ... to be loved.
Love is you ... you and me
Love is knowing ... we can be.
Love is free, free is love ...
Love is living, living is love ...
suchalovely lyric ^.^
အမှန်အကန် ဒေါင်းတွေ တဖြတ်ဖြတ် ပျံသန်းနေဆဲမှာ
အကြံအဖန်ဒေါင်းတွေ တ၀ုန်းဝုန်း ပြေးလွှားနေကြတယ်
ဒေါင်းအမှန်တွေ လမ်းခုလတ်မှာ ထိခိုက် ကျိုးကျေခဲ့ပေမယ့်
ဒေါင်းအကြံတွေတော့ ပန်းပန်နေဆဲပေါ့ …။
ငွေပေါ် လျှော့ဈေးလည်း ရှိရဲ့
အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းတဲ့သူလည်း ရှိရဲ့
အသက်နဲ့ လဲမယ့်သူလည်း ရှိရဲ့
အသက်နဲ့ လဲမယ့်သူလည်း ရှိရဲ့ …။
ကျန်ကောင်း ကျန်ပါသေးရဲ့ …။
Posted by ewhainnshwe at 9:33 PM No comments:
ဂျက်ဆင်က သက်သေခံလို့ အင်းယားကန်ကြီးတည်ဆဲပါ…
မရှိတော့တာ အုတ်ခုံပြင်ထက်က တစ်ချိန်က တို့သမဂ္ဂ...
OK - ဆိုစကားတစ်လုံးနောက်မှာ ပြာပုံအဖြစ်အတိလဲကျ…
ဒေါင်းငှက်တွေမီးသင့်လို့ကျူးရင့်လို့အော်မြည်သံ သမိုင်းထက်မှ မတင်ကျန်လဲ
နှလုံးသားထက်ခိုနေပြန် ကြည့်တတ်ရင် မြင်နှိုင်ပါတယ် ယုဒဿန်ကငိုနေဆဲ……..
ကန်ရေပြင်အင်းယားက မကြည်လင်ဘူး နီနေမြဲ…. ကမ္ဘာမကြေဘူးဟေ့
ခွပ်ဒေါင်းကစတဲ့ဇာတ်ကို ခွပ်ဒေါင်းမှ ခရာတွင်ခဲ့
ဥဒေတယံ ဂါထာကျူးပြီး ဥဒေါင်းမင်းလိုသဘောလည်းမကောင်း….
အချုပ်ကျရန်ဟန်တွေပြလည်း သွေးမကြောင်တတ်တာ ငါတို့ခွပ်ဒေါင်း.....
Jan 13, 2011 လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြောင့်လွတ်မြောက်လာသူတွေကို ကြိုဆိုပြီးစပ်ဆိုထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ EMG ရဲ့ Facebook က comment တစ်ခုမှာတွေ့လို့ ကူးလာပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာလေးတွေပဲ ပြင်ပြီး အမှတ်တရ သိမ်းထားလိုက်တာပါ ...)
Posted by ewhainnshwe at 11:43 PM No comments:
သွေးမကြောင်သူ ခွပ်ဒေါင်းများသို့ ပေးဆပ်သူနှလုံးသား...